Erdogan oo walaac ka muujiyay xiisada u dhaxaysa Mareyanka iyo Waqooyiga Kuuriya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldErdogan oo walaac ka muujiyay xiisada u dhaxaysa Mareyanka iyo Waqooyiga Kuuriya
August 11, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. [Xigashada Sawirka: Anadolu]
Istanbul-(Puntland Mirror) Turkiga ayaa rajeynaya in xiisada sii kordhaysa ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya aysan sababi doonin dagaal la isku adeegsado hubka wax gumaada ee nukleerka, sida uu sheegay Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan maanta oo Jimce ah.
“Waxaanu rajaynaynaa in khatarta u dhaxaysa Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya aysan isku bedelin dagaal,” Erdogan ayaa wariyeyaasha sidaa ugu sheegay Istanbul.
“Xiisadu maahan mid ay labadooda keliya xadidi karaan,” ayuu yiri, isaga oo ka digay in xaaladu ay keeni karto khatar kale.
“Waxaan rajaynayaa in arrinta lagu xalin karo siyaasad ahaan,” ayuu ku daray.
Xiisada u dhaxaysa Washington iyo Pyongyang ayaa xumaatay dhawaantan.
Talaadadii, Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si xun ugu goodiyay Waqooyiga Kuuriya haddii ay khatar geliyaan dalkiisa.
Khamiistii, wakaalada wararka Waqooyiha Kuuriya ee KCNA ayaa soo xigatay saraakiil Waqooyika Kuuriya katirsan oo dhahaya in istiraatiijiyada Mareykan ee gobolka iyo cunaqabateenada ay u keeni karto in si foolxun loo garaaco iyo cawaaqib xumo.
January 9, 2017 Erdogan oo wacad ku maray in uu la dagaalami doono Islaam naceybka iyo ajaaniib naceybka